* Light Of Myanmar *: February 2008
OSCAR ဆုရ သတင်းထောက်များ
BBC သတင်းထောက်ဟာ 9/11 မှာ Tower7ကြီးကို မျက်နှာမူပြီး အဲဒီတိုက်ကြီးပြိုကျသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း CIA ခိုင်းတဲ့အတိုင်း ကြေငြာတဲ့ ဇတ်လမ်းဗီဒီယိုကို (သတင်းဗီဒီယို) တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ Google ကနေ အဲဒီဗီဒီယိုကို ဖျက်ပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မကြာခဏ ပြန်တင်ခဲ့ရပါတယ်။ BBC သတင်းထောက်ထက်ပိုပြီး ရယ်စရာကောင်းတာကတော့ Fox သတင်းကြေငြာသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အပြည့်အစုံသိချင်ရင် ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ အသစ်ဖြည့်စွပ်ထားပါတယ်။ သူတို့သတင်းထောက်တွေဟာ သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ OSCAR အကယ်ဒမီဆု ရထိုက်သူတွေ ဖြစ်ကြောင်း မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ၀ါဒအစွန်းရောက်တွေ ဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by * In Search of Truth * at 11:24 AM0comments Links to this post
It is essentially through the message of Buddha that we can look at our problems in the right perspective and draw back from conflict and from competing with one another in the realm of conflict, violence and hatred."
ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဂုဏ်ယူစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံဖြစ်ရချင်းပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ တခြားဘာသာတွေနဲ့ မတူညီတဲ့ ထူးခြားချက် အချက် (၃) ချက်ရှိပါတယ်။ (သေသေချာချာပြောရင် ၃ ချက်မက ပါဘူး ) အဲဒါတွေကတော့
(၁) ရှင်တော် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားသော တရားတော်တွေဟာ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပြီး ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ တရားသေ Dogma များလုံးဝမရှိပါ။
(၂) တရားတော်ဟာ လက်တွေ့ကျကျ လေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့အောင်လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။
(၃) နောက်ဆုံးတစ်ချက် ကတော့ ရန်သူ/ မိတ်ဆွေမခွဲကို မေတ္တာထားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာမေတ္တာတရားဟာ လောကကြီးမှာ အရမ်းအရေးကြီးပုံကို အထောက်အထားတွေနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ်။ မေတ္တာပို့တဲ့ အလေ့အထဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းမှာပဲ တွေ့ရပါတယ်။ သိပ္မံနယ်ပယ်မှာလဲ မတွေ့ရပါ။ မွတ်ဆလင် ၊ ခရစ်ယာန် နဲ့ ဟိန္ဒူတွေမှာ မေတ္တာပို့တဲ့ ဓလေ့ မရှိပါဘူး။ တခြားဘာသာတွေအမြင်မှာ မေတ္တာပို့တာတို့ သည်းခံတာတွေဟာ လောကထဲမှာ အသုံးမ၀င်ဘူးတဲ့။ အပြစ်ရှိသူကို ခွင့်လွှတ်တာထက် အပြစ်ပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်ဆိုပဲ။ ခွင့်လွှတ်လိုက်ရင် အပြစ်လုပ်သူတွေ ပိုများလာနိုင်တယ်လို့ ယူဆကျပါတယ်။ ပြောပုံကတော့ မှန်နေသလိုပဲ။ နောက်ပြီးမေတ္တာဟာ ရန်သူပေါ်မှာ အသုံးမ၀င်သလို သည်းခံတယ်ဆိုတာ စိတ်ပျော့ညံ့သူတွေ အတွက်လို့ စွပ်စွဲထားကျပါတယ်။ အဲဒီအယူအဆဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ထဲမှာတောင် စိမ့်ဝင်နေပါတယ်။ ဒီတော့ အပြစ်ပေးတာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ အပြစ်ပေးဖို့ ပထမဆုံး အမှားနဲ့ အမှန် ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေ (မြန်မာပြည်မှာ မွေးတဲ့ လူအားလုံးကို ရည်ရွယ်ပါတယ်) သတိမထားမိတဲ့ အချက်ကတော့ အမှားနဲ့ အမှန်ဟာ ခွဲခြားလို့ မလွယ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့တွေရဲ့စိတ်မှာ ဒေါသ၊ လောဘ၊ မောဟတွေပြည့်နှက်နေတဲ့အတွက် မှန်ကန်စွာ မတွေးခေါ်နိုင်ပါဘူး။ တချို့ကတော့ ဦးနောက်နဲ့ စဉ်းစားလို့ ရတယ်ဆိုပြီး ပြောကျပါမယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစွဲတွေ၊ ၀ါဒအစွဲတွေနဲ့ မသိနားမလည်မှုတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး အမှားအမှန်ကို စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ကျပါတယ်။ အဲလို အစွဲအလမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာဟာ မှန်ဖို့ အကြောင်းရှိလား?
ကျနော်တို့လို သာမန်လူမပြောနဲ့ အမှုတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စစ်ဆေးနေရတဲ့ တရားသူကြီးတွေတောင် အပြစ်ရှိမရှိ မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ ကနေဒါမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်တုံးက ဦးလေးဖြစ်သူဟာ သူရဲ့ တူမလေး (အသက် ၆ နှစ်) ကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး သတ်ပြစ်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ ၁၀ နှစ်လောက်ကြာပြီးမှ DNA ပြန်စစ်တော့ ဦးလေးရဲ့ DNA မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေလို့ ထောင်ကနေ ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဦးလေးကတော့ အရှက်လဲကွဲ၊ ဘ၀လည်းပျက်သွားမှာပေါ့။ လျော်ကြေး တောင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီး လျှောက်မတွေးနဲ့နော်။ တရားသူကြီးမှားယွင်းပြီး လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှာ လျော်ကြေး တောင်းခွင့်မရှိဘူးဗျ။ နောက်တခုကတော့ နာမည်ကြီး Lacy Peteson အမှုပါ။ Scott Peterson ကို ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထား သက်သေ မရှိပဲ သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာ အင်မတန်ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ သံသယ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ဘာတွေ လာပြောမနေနဲ့။ အဲဒါ စာအုပ်ပေါ်မှာပဲ ရှိတယ်။ တမ္ဘာလုံးက အာရုံစိုက်နေတဲ့ အမှု့ကြီးမှာ အဲလိုဖြစ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတစ်ယောက် မတရားအမှုချမှတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ စာအုပ်ထုတ်ပြီး စီးပွားရှာလိုက်တဲ့ သူကလဲရှိသေး။ စကားစပ်လို့ အမေရိကမှာ တရားစီရင်ပုံလေးကို သိသလောက် မျှဝေချင်ပါတယ်။ တရားစီရင်တဲ့နေရာမှာ တရားသူကြီးက အမှုကို မဆုံးဖြတ်ပါဘူး juror လို့ခေါ်တဲ့သူတွေက အမှုကို ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Juror တွေဟာ အရပ်ဖက်က ဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ၇ုံးဝန်ထမ်း၊ ကျောင်းသား၊ အလုပ်သမားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဆိုက် တစ်ခုမှာ ဘာရေးထားလဲဆိုရင် Juror တွေကို အကဲခတ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ ရှိတယ်ဆိုပဲ။ အဲဒီလူကနေ Juror တွေရဲ့ စိတ်ထားကို လေ့လာပါတယ်။ ပြီးတော့မှ Juror တွေ နှစ်သက်မယ့် အ၀တ်အစားနဲ့ အပြောအဆိုတွေကို ရှေ့နေတွေကို အကြံပြုတယ်ဆိုပဲ။ Juror တွေက အမှုကို အနိုင်ပေး ချင်အောင် ပြုမှုပြောဆိုဆက်ဆံဖို့ပါ။ အဲလိုနည်းတွေကို သုံးထားတာကြည့်ရင် စစ်ဆေးပုံဟာ သမာသမတ်မကျဘူးဆိုတာ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
အထက်က အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ရင် လောကမှာ ဘယ်သူ လူဆိုးလဲဆိုတာ ရှာဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် သူတော်ကောင်းလုပ်တဲ့သူကို ရှာလို့လွယ်လားကြည့်ကျရအောင်ပါ။
ကျနော်တို့ ရွှေမြန်မာတွေရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ကိုယ့်လူမျိုးဆို အထင်သေးကျပါတယ်။ အဲလို အထင်သေး အမြင်သေးနဲ့ ပြောလိုက်ရရင် ဆရာကြီး တဆူလို ဂုဏ်ယူကျပါတယ်။ အဲဒီလူတွေဟာ အဖြူဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လုပ် အထင်ကြီးပါတယ်။ လိမ်တိုင်းယုံပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကလူတွေ ဘာပြောလဲဆိုရင် မြန်မာတွေလုပ်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေဟာ လိမ်တာကများတယ်။ အဖြူတွေလုပ်တဲ့ အဖွဲ့တွေလို အားကိုးရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးတဲ့။ အဖြူတွေလုပ်တဲ့ Non-profit organization တွေ စေတနာနဲ့ လုပ်နေတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ လူယုတ်မာဘယ်သူလဲဆိုတာ မသိနိုင်သလို သူတော်ကောင်း ဘယ်သူလဲဆိုတာလဲ သိဖို့ခက်ပါတယ်။
တခါတုံးက Toronto Star သတင်းစာထဲမှာ ကနေဒါနိုင်ငံ လူမှုရေးအသင်းတွေရဲ့ (nonprofit) မသမာမှုဆောင်းပါးရှည်ကြီး တစ်ခုဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ nonprofit အသင်းတွေဟာ အလှူခံရလို့ရတဲ့ငွေ $10 မှာ $1ပဲ သူတို့ပြောသလိုအသုံးပြုပြီး $9 ကိုတော့ အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ သူတို့အိပ်ထဲ ထည့်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အသင်းထောင်အလှူခံတဲ့ကိစ္စက အစ အဖွဲ့ ၂ ခု ၃ ခု တပြိုင်တည်း စင်ပြိုင်ထောင်ပြီး လုပ်စားတာတွေအထိ ရေးထားပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ Red Cross ဟာ nonprofit မဟုတ်ပါဘူး။ nonprofit စာတန်းကို အရေခြုံပြီးစီးပွားရှာနေတဲ့ အုပ်စုကြီးပါ။ ကျနော်တို့ လှူတဲ့သွေးတွေဟာ ဇီဝိတဒါန မမြောက်ပါဘူး။ Red Cross ဟာ အမေရိကန် ဆေးရုံတွေမှာ "သွေး" ရောင်းပြီး စီးပွားရှာနေပါတယ်။ သွေးရောင်းတယ်လို့ပြောရင် မဖြစ်စလောက်လေးပါလို့ ထင်ရင်မှားသွားပါမယ်။ တနှစ်ကို $1.5 billion ဖိုးရှိပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဗျောင်လိမ်ဗျ။ Red Crossက ငွေကြေးအများစုဟာ ၀န်ထမ်းခတွေမှာ ပြန်သုံးရတဲ့အတွက် ဘာမှ မကျန်ဘူးဆိုပဲ။ တကယ်တော့ အလုပ်သမားအများစုဟာ အခမဲ့ လုပ်အားပေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် သွေးဈေးကွက်ရဲ့ တ၀က်ကို Red Cross က လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Johnson & Johnson ကနေ ကြက်ခြေနီ trademark ဟာ သူတို့အရင်ဆုံးသုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမြတ်ရရှိရေးအတွက် လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ ကြက်ခြေနီ တံဆိပ်ကို ဆက်လက်မသုံးဖို့ တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ ထုံးဆန်အတိုင်း လိမ်ရင် ဗျောင်လိမ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားအရ Red Cross ဟာ ရတဲ့အမြတ်တွေနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုတယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။
အသားတင်အမြတ်ရတဲ့ အလှူငွေတွေကို Red croos ဘယ်လိုသုံးလဲ?။ ပထမ ချမ်းသာတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ အလှူခံပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ဟန်ပြသုံးပြီး ကျန်တာတွေ အိပ်ထဲထည့်တယ်လို့ ပြောကျပါတယ်။ 9/11 အလှူခံတုံန်းက $564 သန်း ရတဲ့အထဲက $154 သန်းပဲ အသုံးပြုပြီး ကျန်တာတွေကို လက်စဖျောက်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းဆိုး ထွက်ပါတယ် ။ sanfrisicoo ငလျင်မှာတုံးကလည်း $50သန်း ရတဲ့အထဲက $10သန်းပဲ သုံးပြီးကျန်တာ သူတို့အိပ်ထဲထည့်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် အစိုးရဆီကနေ ထောက်ပံ့ကြေးတွေ ရထားတယ်ဆိုတာ သိထားမယ်ဆိုရင် Red Cross ဘယ်လောက် ငွေလိမ်ထားလဲ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ Red cross ကို အထူးပေးဖေါ်ပြရလဲဆိုရင် သူက မြန်မာပြည်မှာ သူတော်ကောင်းအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် နာမည်ကြီးနေလို့ပါ။ အမေရိကန်မှာ နာမည်ပျက်နေတဲ့ Red Cross သွေးမတော် သားမစပ်တဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ စေတနာနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုတာ သံသယရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုးလား အမှန်သူတော်ကောင်းလားဆိုတာမိမိဖာသာ ဆုံးဖြတ်ပါ။
အနောက်ကို အဖေခေါ်ချင်သူတွေကတော့ Red Cross မကောင်းပေမယ့် အနောက်နိုင်ငံက အရင်းရှင်ကြီးတွေဟာ တကယ်ကို လေးစားထိုက်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကျမှာပါ။ သဌေးကြီးတွေဟာ စကားပြော အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဟန်ဆောင်လဲတော်ပါတယ်။ Warren buffet လို သဌေးကြီးဟာ ဒေါ်လာ 30 billion ကို Bill Gates ရဲ့ Foundation ကိုလှူတဲ့ ကိစ္စကို ရော သာဓုခေါ်ချင်သလားခင်ဗျာ? အဖြူတွေဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ယုံတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါ။ Bill Gate Foundation ဟာ ကူညီရေးမှာ နာမည်ကြီးတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့် Bill Gates တစ်ယောက်ထဲကို အဲလောက်ကြီးလှူမလဲ? စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ Rockefeller အဖွဲ့အစည်း အကြောင်း သိထားတဲ့သူတွေကတော့ သာဓုခေါ်ဖို့နေနေသာသာ ကြောင်သူတော်ကြီးဆိုပြီး ပြောကျမှာပါ။
ဆောင်းပါးလည်းရှည်နေပါပြီ အမောပြေ ဗီဒီယိုလေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ပြီးမှ ဆက်ဖတ်ပါခင်ဗျာ။ အဲဒီဗီဒီယိုကတော့ ကျနော်တို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ရှက်စရာကောင်းလောက်အောင် တလေးတစားသွားပြီးတွေ့ခဲ့သူ၊ အစွန်းရောက်ဝါဒစွဲတွေ အဖေခေါ် အားထားနေတဲ့ ပေါတောတော George W Bush - American Idiot လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဗီဒီယို ဖြစ်ပါတယ်။
A truth ceases to be true when more than one person believes in it. --Oscar Wilde
လောကကြီးမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမြင်ရပဲ အားလုံးဟာ ၀ါးနေပါတယ်။ ဘာမှကို ကြည်ကြည်လင်လင်မမြင်ရပါ။ တကယ်ကြည့်လေ ၀ါးတားတားဖြစ်လေပါ။ အမေရိကန် Virginia Tech တက္ကသိုလ်မှာ သတ်ဖြတ်တဲ့ ကိစ္စကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စမှာ လူသတ်သမားဟာ အေးအေးဆေးဆေး သတ်သွားတာမို့ မသင်္ကာမှုတွေရှိနေပါတယ်။ ရဲတွေ လက်ပိုက်ကြည့်နေတာလည်း မရိုးသားမှုတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရ ပါဝင်နေလား မဆုံးဖြတ်ပါ။ အောက်ဘက်မှာ ကိုးကားချက်တွေကို တသီတတန်းကြီးချပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားပေးကျပါ။
ဆွေးနွေးချင်တာလေးတော့ ရှိပါတယ်။ 2007 မှာ ကိုရီးယားလူမျိုး Seung-Hui Cho ဟာ သေနတ်နဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ပြစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသား 32 ယောက် သေဆုံးပြီး 17 ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့ ပါတယ်။ အမေရိကန် သမိုင်းမှာ အသေအပျောက်အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာ Seung-Hui ဟာ အမှန်တကယ် ဘယ်သူလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
မူခင်းရေးရာကျွမ်းကျင်သူ Professor Charles Mesloh က တွေ့ဆုံခန်းမှာ ဘာပြောလဲဆိုရင် " 9mm သေနတ်နဲ့ 32 ယောက် ပွဲချင်းပီး သေအောင် သတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားတော့ တော်တော်ကို အံ့သြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသေနတ်ဟာ လူကို အနီးကပ်ပြီးပြစ်မှ သေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Seung-Hui Cho ဟာ သာမန်လူ မဖြစ်နိုင်ပဲ အထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ လူသတ်သမားပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 9mm သေနတ်နဲ့ ပစ်ခံရသူ 60% ကျော်ကို ပွဲချင်းပြီး သေအောင် သတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်တုံးမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။". Professor တွက်ထားသလို ထင်တဲ့သူ တော်တော်များများလဲရှိပါတယ်။ Wikipedia မှာ တင်ထားတဲ့ပုံမှာ Seung-Hui Cho ဟာ အမေရိကန် Marine ၀တ်စုံနဲ့ပါ (အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါ)။ ဒီမှာဆွေးနွေးထားတာကတော့ Wikipedia ဟာ ပထမ အဲဒီပုံကို နာမည်နဲ့ Marine ဆိုတဲ့ စာတန်းကို မမြင်ရအောင် ဖြတ်တောက်ပြီး တင်ထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပုံတစ်ခုလုံးကို လုံးဝ ခွာချလိုက်ပါတယ်။ Wikipedia ဟာ ဘာကြောင့် ဒီပုံကို ဖျက်ပြစ်လဲ? နောက်ပြီး ဘာကြောင့် သတင်းဌာနကြီးတွေ ဒီပုံအကြောင်း မဆွေးနွေးပဲနေလဲ? စဉ်းစားပေးကြပါခင်ဗျာ။
ကျနော်တို့ ပြောချင်တာက လောကကြီးဟာေ၀၀ါးနေပါတယ်။ တကယ်ပဲ အမေရိကန် အစိုးရကနေ သူရဲ့ စစ်သားကို Mind Control စံနစ်နဲ့ သတ်ဖြတ်ခိုင်းတာ ဟုတ်မဟုတ် အတိအကျ ပြောလို့ မလွယ်ပါဘူး။ အမှား အမှန်သိဖို့က အချိန်ပေးပြီးလေ့လာမှ သိနိုင်မှာပါ။ ဒီမိုကရေစီ ထောက်ခံသူတွေကတော့ ခတ်လွယ်လွယ်ပဲ အမေရိကန် အစိုးရ မပတ်သက်ဘူးလို့ ဖင်ပိတ်ငြင်းကျမှာပါ။ နအဖလူတွေကတော့ အမေရိကန်အစိုးရပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လုံးဝ ပြောကျမှာပါ။ အားလုံးဟာ မိမိ ၀ါဒအစွဲအလန်းပေါ်မှာ ဆုံးဖြတ်ချင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည် နေချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လောကကြီးဟာေ၀၀ါးနေတယ်လို့ ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘလော့လောကမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာလေးကို တင်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီလိုပါ။ ဒီမိုကရေစီဘလော့တွေမှာ လိုက်ပြီးဆဲတဲ့ အစဉ်အလာ ဖြစ်နေတာကြာလှပါပြီ။ တော်တော်ကို မသင့်တော်ပါဘူး။ အဆဲခံရတဲ့ ဘလော့ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လိုခံစားရလဲ မသိဘူးဗျ။ မသဒ္ဒါနဲ့ အန်တီမေငြိမ်း နှစ်ယောက်ဆိုရင် ဆီပုံးတွေမှာ အဆဲခံရတိုင်း ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ အူယားဖားယား လူတိုင်းကို အသိပေးတာ မကြာခဏပါပဲ။ (မသဒ္ဒါဆိုတာ တီးရှော့မှာ အမေရိကန်စားသောက်ဆိုင်တွေ အစားအသောက်ထဲ တံတွေးထွေးထည့်တဲ့ အကြောင်းသက်သေနဲ့ လူတစ်ယောက်က ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာ တစပ်စပ်နဲ့နာသွားတဲ့အစ်မကြီးပါ) သူတို့ ဂုဏ်သိက္ခာကျစေတဲ့ စာတွေ တခြားလူတွေ မြင်တော့ ဘာများအကျိုးရှိမှာမို့လဲ? အခုတော့ အဲဒီနှစ်ယောက် ငြိမ်သွားပါပြီ။
ဒီမိုကရေစီဘလော့တွေကို ဆဲတာနအဖလူ ကိုနေ၀င်းလို့ သက်သေမရှိပဲ စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ ကိုနေ၀င်းဟာ သူမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းခဲ့ပါတယ်။ အရေးအခင်းအပြီးမှာ ကိုသာကီနွယ်၊ ကိုOppositeyes ဘလော့တွေကို ဒီမိုကရေစီသမားတွေက လူမြင်လို့ မကောင်းအောင် ဆဲခဲ့ကျပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီဘလော့တွေကို အရင်တုံးကလို ဆဲတဲ့သူတွေ မရှိကျတော့ပါဘူး။ တကယ်ဆိုရင် အပြန်အလှန် ဆဲနေကျရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ? အဖြေပေးရဲလား?
နောက်ထပ် ဒီမိုကရေစီသမားတွေ ဘာလုပ်လဲဆိုရင် မော်စကိုသား နာမည်နဲ့ နအဖ စစ်သားယောင်ဆောင်ပြီး ကျနော့ဆီပုံးမှာ ဘုန်းကြီးတွေသတ်တာကို အားပေးထားပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကိုလည်း ဆဲထားပါတယ်။ ဒါတင်မကပဲ "ဇော်မျိုး" နာမည်နဲ့လည်း ဘုန်းကြီးသတ်ကို အားပေးတဲ့အရေးအသားတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ (ကျနော်တို့ ဆီပုံးမှာ ဆဲနေတာတွေ နေစဉ်နဲ့အမျှမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်) အခုလဲပဲ ဒေါင်းငြင်း အဖွဲ့ကလူတွေ ကျနော်တို့ ဆီပုံးမှာလာရေးတိုင်း သူတို့ နာမည်အမှန် လုံးဝ မသုံးပါဘူး။ တွေ့ရာနာမည်နဲ့ သူတို့ ဒေါင်းငြင်းအဖွဲ့ကိုလာဖို့ စိန်ခေါ်ကျပါတယ်။ ကိုနေနတ်နွယ်တို့ ကိုထိုင်းတို့ဟာ လူသိရှင်ကြား ဆဲဖို့အားပေးတဲ့လူတွေပဲ မဟုတ်လား? သူတို့ ဘလော့တွေမှာ ဆဲစာနဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပဲ တင်ထားပါတယ်။ နအဖ ဘလော့တွေမှာ ဘယ်နှစ်ခုများ အဲဒီဘလော့တွေလို အောက်တန်းကျတာ ရှိလို့လဲ? အခြေအနေကို သေသေခြာခြာကြည့်လိုက်ရင် ၀ါးနေပါတယ်။ မကော်ပီပေါက်စကို ဆဲတဲ့သူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီ စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်အောင် လုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့ အစိပ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အစွန်းရောက်ဝါဒီတွေလို ဘာသက်သေမှမရှိပဲ အတိအကျကြီးစွပ်စွဲတာမျိုးလုပ်တာ မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ အထောက်အထားတွေ ကြောင်းကျိုးပြချက်တွေနဲ့ စွပ်စွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဥာဏ်မှီသလောက် ပြောထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရိုးသားစွာ ၀န်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ အမှားမြင်ရင် ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရန်သူမျိုးငါးပါးထဲမှာ မင်းဘေးဟာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဆုံးမစကားကို သတိရပါ။ ဒီခေတ်မှာ "မင်း" ဆိုတာ နိုင်ငံရေးသမားလို့ အဓိပါယ်ဖွင့်ရင် သင့်လျော်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေ၊ ဦးရှုမောင်၊ ဦးဗိုလ်မြ၊ ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်တို့တွေဟာ နိုင်ငံရေးသမားတွေပါ။ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ မရှိလို့ မရပါဘူး။ ရှိရင်လဲ လူတွေကို ပုံဆံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဒုက္ခပေးကျပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ လုံးလုံး သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နလန်မထူနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ နအဖကလဲ ဒေါ်ကော်ပီစုကြည်ကို အပြစ်တင်သလို၊ ဒေါ်ကော်ပီစုကြည် အဖွဲ့တွေကလဲ နအဖကို အပြစ်တင်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးဟာ သူတို့ နိုင်ငံရေး အကျိုးအမြတ်ပဲ အလေးထားတဲ့ မင်းဆိုး မင်းညစ်တွေပါ။ အောက်တန်းစား နိုင်ငံရေးသမားတွေ ချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို လွတ်လပ်ရေးရရင် စာရေးဆရာဘ၀နဲ့ အဏာ မယူပဲနေမယ်ဆိုတဲ့သူ မရှိသေးပါဘူး။
ဒီနေ့တိုင်းပြည်ဟာ နိုင်ငံရေးအရ ရှေ့မတိုး ၊ နောက်မဆုတ် အခြေအနေကြီးထဲရောက်နေပါပြီ။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ နအဖ သတ်ဖြတ်တဲ့ ၁၉၈၈ နဲ့ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်း တွေကို နိုင်ငံရေးကစားကွက် လုပ်ပြီး ထောက်ပံ့ကြေးငွေတွေ ဆက်လက်ရရှိအောင် လုပ်နေကျပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျပြောပါမယ်။ ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမှ ပြည်သူတွေသေလို့ စိတ်ထိခိုက်တာ မရှိပါဘူး။ ဟန်ဆောင်ပြီး ပဲများနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ အဏာရလဲ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်ကျမှာပါပဲ။ ဒီဆောင်းပါးဟာ လက်တွေ့ကျကျပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
9/11 မှာ လူပေါင်း 6,000 ကနေ 10,000 အထိ ဘာမှမသိပဲ အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အားလုံးဟာ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်တွေပါ။ BUSH ကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါ။ New York Times သတင်းစာကနေ အမေရိကန်အစိုးရ 9/11 လုပ်သည်ဖြစ်စေ မေ့သင့်ပြီဆိုတာ ပြောနေပါပြီ။ ကျနော်တို့ဆီမှာ အသတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာ ခဲကိုင်၊ ဒုတ်ကိုင်၊ ပုဆိုးလှန်ပြတဲ့သူတွေပါ။ အဲဒီသူတွေဟာ နအဖ ထိပ်ပိုင်းရဲ့ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ချိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကို မပြစ်ခင်မှာ စစ်တပ်ကနေ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ သေဖို့နဲ့ နေဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ 9/11 နဲ့ 7/7 လူတွေလို မဟုတ်ပါဘူး။ သတ်ခံရတော့လဲ လူ တစ်ရာတောင်မပြည့်ပါဘူး။ မမေ့နိုင်ဘူး၊ ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သူတွေဟာ ဘာကောင်တွေမို့လဲ?
အမှန်တကယ်တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့သူတွေကိုတော့ ပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ပြန်လည်အဆင့်အတန်းမြင့်လာအောင် နအဖကို အတင်းပြော၊ စိတ်နာနေတာနဲ့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါ။ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေ အကျိုးကိုကြည့်ပြီး ခွင့်လွတ်လိုက်ပါ။ မေ့လိုက်ပါ။ လုပ်သင့်တာကိုပဲ လုပ်ပါ။ How Buddha influenced Nehru ဆောင်းပါးလေးလည်း ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်လိုက်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမေရိကန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရလောက် ဗုဒ္ဓဘသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ နအဖ မရက်စက်ခဲ့တဲ့အတွက်တော့ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တောသားနှစ်ယောက်ကတော့ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တာကို အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။
အမေရိကန် လူမှုရေးအသင်းများ နှင့်ပတ်သက်သည့် ကိုးကားချက်များ
THE BLOOD BROKERS - RED CROSS: FROM DISASTER RELIEF TO BLOOD
Bill Clinton and the Canadian tainted-blood scandal
Tainted blood victim says Crown failed him
The American Red Cross Gets HalfaBillion, So Where's the Money Going?
Aid workers 'stole $200,000 Katrina cash'
"The Red Cross Has Basically Stolen Money from Victims in New Orleans"–People's Hurricane Relief Fund Blasts Katrina Aid Program
Red Cross Collected Unneeded Blood
Red Cross Fined $4.6. Million Over Donation Screenings
Johnson & Johnson sues American Red Cross over use of emblem
Area United Way's Ex-Chief Admits $500,000 Fraud
Boycott United Way!
Virginia Tech သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်သည့်ဆောင်းပါးများ
Mesloh - Two Semiautomatic Handguns Used in VT Shooting (ဗီဒီယို)
Photo Evidence of US Military Psyop [Cho Seung Hui] (Forum)
The Virginia Tech Conspiracy (ဒီမှာ အားလုံးအသေးစိပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်)
Strange Virginia Tech "Coincidences"
Virginia Tech: Cho Seung-Hui's Video to NBC
Posted by * In Search of Truth * at 12:02 PM9comments Links to this post